Musharax Daahir Geelle” Hadalkii Farmaajo waxaa ka muuqday fasal kale oo guuldarro ah” – DMS
HomeWararkaMusharax Daahir Geelle” Hadalkii Farmaajo waxaa ka muuqday fasal kale oo guuldarro ah”
Daahir Maxamuud Geelle oo kamid ah Midowga Musharixiinta Madaxweynaha ayaa ka hadlay Khudbadii uu habeen ka hor jeediyay Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Musharax Daahir Geelle waxaa uu sheegay in Farmaajo uu ku guuldareystay inay u hirgasho qorshihiisii muddo korrsiga, sidoo kalena khubadii uu jeediyay ay ka muuqatay fasal kale oo guuldarro ah oo ku dhacday Farmaajo.
Waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in Farmaajo aragtidsiisa aysan aheyn in wada xaajood la galo balse ay ku saleysan tahay in xujeeytan la sameeyo, waxaana Bulshada Soomaaliyeed uu ugu baaqay inay ku dheganadaan in wax walba lagu xaliyo wada-hadal.
Ugu dambeyn Musharax Madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle waxaa uu sheegay in Madaxweyne Farmaajo Afarsii sano ee uu joogay uu ku guldareysay, Amniga dalka, dib u heshiisiinta, Siyaasadda Arrimaha dibadda, waxana uu ugu baaqay in uu joojiyo xujooyinka uu wado.
Maxay kawada hadleen RW Rooble, Qoorqoor, Cali Guudlaawe iyo ganacsatada G.Banaadir?